Ngwaahịa igwe anụ ụlọ Ndị na-ebubata na ụlọ ọrụ - China Metal Pet Products Ndị na-emepụta ihe
Ogige ịchọ mma
Igwe osisi ihe nkwuba igwe nwere ụdị nnụnụ nwere akwa Birdhouse
Igbe ihe ọkụkụ
Metal home mma
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ metal
Elekere mgbidi ígwè
Metal mgbidi ihe ndozi
Nko ihe ndozi mgbidi
Ngwa ụlọ metal
Ihe njide kandụl
Ihe njide akwa akwa
Ihe njide anụ ahụ
Metal anụ ụlọ ngwaahịa
Ihe njide eriri anụ ụlọ
Ebe mkpofu anụ ụlọ
Ngwa egwuregwu igwe
Ụlọ mgbidi metal
Shelf ụlọ ịwụ
Obere igwe kwụ otu ebe (A)
Obere igwe kwụ otu ebe ọcha muti ọrụ dị ntakịrị
Multi ọtọ metal mgbidi shelf
Ngwongwo mgbidi metal maka etiti foto
Ihe eji achọ ụlọ mgbidi shelf
Ngosipụta igwe na-akpali akpali
hanga igwu mmiri
Ihe nrite egwuregwu maka ihe nrite ịgba ọsọ na Marathon
Shelf iko ọla nwere ihe nrite
Dog poop bag dispenser metal pet waste station nwere ...
Obere igodo igwe & Dog Leash Hanger
Nkịta na-eri nri na-adịghị amị amị
Nnukwu nnukwu efere nri nkịta nwere onwe ya
Igwe anaghị agba nchara mara mma welitere nkịta nri efere
Akwụkwọ mpịakọta kichin
Ihe njide mpịakọta ụlọ mposi
Ifuru nke ndụ ihe njide akwa nhicha
Akpa nkịta nkịta na-ekesa igwe ihe mkpofu anụ ụlọ nwere bọọdụ akara
Ihe: galvanized mpempe akwụkwọ
Ogo: 190cm H.
A ga-anabata imewe ahaziri ahazi, ngwugwu, agba.
Igodo ọla dị elu Rack & Dog Leash Hanger
Na-adọta nko ihe ndozi mgbidi maka ụlọ ọ bụla.
Ogo: Emere ya site na ihe nchara dị arọ dị arọ, dị ike, siri ike, na nkọwa zuru oke. 100% nyochaa àgwà tupu mbupu.
Mmecha: ntụ ntụ na-adịgide adịgide kpuchiri na oji, agba ọcha.
A na-ejikarị ya eme ihe:Jide leashes nkịta, igodo, akpa etc.Ọ bụghị naanị nko imewe, nakwa ihe ịchọ mma mgbidi.
OEM & ODM: Anyị na-eme ka niile ahaziri metal ngwaahịa, nakwa anyị ọkachamara imewe otu nwere ike ịmepụta aghụghọ dị ka ndị ahịa 'echiche.
Ngwa nke ngwaahịa a bụ Carbon steel/ igwe anaghị agba nchara
Usoro anyị na-eji bụ Laser Cut
Maka nha, anyị nwere nha mgbe niile ma anyị na-anabata nha ahaziri ahazi
Nhazi na akara ngosi ahaziri dịkwa
Maka nkwakọ ngwaahịa ahụ, anyị na-eji igbe agba aja aja ma ọ bụ igbe agba ka ịhọrọ.
Ọ dị mma iri nri maka oke nkịta na nwamba dị iche iche.Ọ dịghị mkpa ịzụta ọtụtụ efere anụ ụlọ nri dị elu dị iche iche ọzọ.
Bowl Nkịta abụọ: Enwere nnukwu efere igwe anaghị agba nchara 2, dị mfe ịsacha & weta nhọrọ dabara adaba maka nkịta iri na ị drinkụ mmanya n'otu oge.ọ dịghị mkpa ka ị gbadaa n'aka na ikpere iji hichaa ebe nri.
Mpaghara nri zuru oke: nnukwu efere igwe anaghị agba nchara, na-enye ebe nri dị ọcha.Ụdị nkịta a na-ebuli elu na-enyere aka ịkwalite mmegharị nke nri, site n'ọnụ ruo n'afọ, na ịdị elu dị mma na-ebelata olu olu nke nkịta mgbe ị na-eri nri.
Ogologo oge: Ihe igwe anaghị agba nchara na-adịte aka ma sie ike karịa ihe ndị ọzọ dị ka achara, na-adịte aka maka ojiji.
Nkịta ọkwá e buliri elu nwere ike ọ bụghị nanị na-enye ebe obibi nri dị ọcha ma dị nchebe maka anụ ụlọ kamakwa ọ ka mma izere mmetọ nri anụ ụlọ.Nnukwu nnukwu efere nkịta nwekwara ike inyere nkịta aka iji dochie nrụgide nke nkwonkwo na ọkpụkpụ, nke dị mma maka nkịta ndị toro eto.
Nkịta nkịta a zụlitere nwere ike inye ebe a na-eri nri dị ọcha ma dị mma maka anụ ụlọ, nke nwere ike izere mmetọ nri anụ ụlọ, na ọkwá nkịta dị elu na-enyere nkịta aka iji dochie nrụgide nke nkwonkwo na ọkpụkpụ, nke dị nnọọ mma maka nkịta tozuru okè.
Nhazi mara mma na-enye gị ihe ndozi ụlọ mara mma
Igwe ígwè dị elu, obere eriri maka anụ anụ ụlọ gị mgbe ị na-eri nri
Onye na-agwọ ọrịa anụmanụ na-atụ aro nnukwu efere igwe anaghị agba nchara, dị mfe dị ọcha, na-eguzogide nje bacteria
Zuru okè maka obere nkịta na pusi
Nke a nkịta mkpofu anụ ụlọ na-enye Premiya àgwà na echekwa na-eri.Ebe a na-azụ anụ nkịta anyị nwere nke na-adịghị agwụ agwụ, na-adịghị nchara, ọkwa azụmahịa, ike dị elu Aluminom metal.Na-adịgide adịgide, bara uru na nke a pụrụ ịmata ngwa ngwa
Na-adọta nko ihe ndozi mgbidi maka ụlọ ọ bụla.Hook Rack & Wall Art, na-egosipụta Labrador.Na-eme nnukwu mgbakwunye na ụlọ ma ọ bụ ubi gị, ma ọ bụ onyinye dị egwu.
okomoko ewelitere nkịta nri efere obere feeder mmiri nnukwu efere nkwụnye (A)
© Nwebiisinka 20112021: Ikike niile echekwabara.
Ngosipụta njide olu, Mgbodo osisi nkwudo mgbidi, Osisi ite Hangers, Nko njide igodo, Igwe mgbidi ọla, Onye nhazi nko igodo,